Easy Multi Ratidza - Dhijitari Signage uye Vhidhiyo Wall Software
Vhidhiyo WALL SOFTWARE
Digital Signage yakapfava kumabhizinesi
Kunyangwe iwe uri bhizimusi diki kana hombe bhizinesi, Easy Multi Ratidza idhijitari chiratidzo software iyo inoita kuti zvive nyore kuratidzira yako multimedia pane akawanda maratidziro.
Ne 1 Standard rezinesi, iwe unogona kuratidza kusvika makumi maviri emaviri masosi emidhiya kamwechete, pamatanhatu matanhatu akasiyana ekuratidzira. Taura nesu nezvedu bhizinesi zvigadziriso sarudzo dzisingagumi kuratidza.
YeRinyore Multi Ratidza, mutengi wese akasarudzika uye ndosaka tichiita poindi yekupa 100% yakashongedzwa-yakagadzirirwa sevhisi yakashandisirwa kune wega mutengi!
Wana Instant Access
Easy Multi Ratidza ndiyo iyo yakanakisa digital siginecha software kune chero sangano rinoda kuratidza ruzivo rwe digital kune vatengi vavo nevashanyi.
Kafesi & maresitorendi
Fashoni & Zvitoro Zvekutengesa
Raira Center & Vanodzima moto
Nyore Multi Ratidza?
Brewery maneja, Brussels
Local Network Access (inoda marezinesi maviri: PC Server uye PC Player)
From € 899 kusanganisira.VAT *
Wedu vatengi vanongoda kuti zvakapusa sei kuratidza midhiya yavo ne Easy Multi Display. Iyo software interface inokutungamira iwe kuburikidza nekugadziriswa kwekuita mudanho nedanho maitiro, kukubvunza iwe mibvunzo yese yakakodzera munzira.
Iwe haufanire kunge uri tech guru kuti umuke uye umhanye neEasy Multi Display. Ichi chikonzero nei software yedu iri ari yakanakisa digital siginecha software
-I nyore Multi Display wizard inotungamira iwe kuburikidza neyakagadziriswa maitiro.
- Sevha akawanda ekuratidzira masisitire uye oakadzoreredza zviri nyore.
- Sarudzo yemutauro: Chirungu, French, Spanish, Chinese, Deutch iri kuenderera ...
Unoda rubatsiro rwekuwedzera zvishoma? Isu tinopa online kana pa-saiti kudzidziswa uye software software, ndapota taura nesu!
Dhawunirodha KWEMAHARA DZESVONDO RINONYANYA KUTI DZIDZIRA KUSVIRA
Iris achishandisa software yedu EasyMultiDisplay
Crypto yekutengesa maonero ane Easy Multi Display
Kumisikidza multi-screen kuratidza videowall
Maitiro ekuratidza media yako
Maitiro ekuratidza TV mu Easy Multi Display?
Kufamba nemaUrl akasiyana munzvimbo dzako makumi maviri neina
EMD bvunzo ine gumi nematanhatu skrini
Julie's Purofesa Digital Signage
WONA ZVESE MAVHIDZO EEDU
dzinofambiswa ne Join.chat
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Guy Condamine, co muvambi weEMD, ngatitaurei pamwe chete.